Daawo:– Wasaaradda Cadaaladda Iyo Diinta Baxrayn Oo Somaliland Kutub Qur’aana Ugu Deeqday | Saxil News Network
Daawo:– Wasaaradda Cadaaladda Iyo Diinta Baxrayn Oo Somaliland Kutub Qur’aana Ugu Deeqday
Hargaysa (Saxilnews): Hay’adda munadamatu dacwatu islaamiya oo ka shaqaysa faafinta diinta islaamka ayaa shalay kutub qur’aanka kariimka ah oo dhan 15200 oo kitaab ku wareejisay wasaaradda diinta iyo awqaafta ee Somaliland.
Kutubtaasi oo ay soo bixisay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha islaamka ee dalka Baxrayn, waxaa wasaaradda diinta iyo awqaafta Somaliland u gudoomay wasiirka wasaaradaasi sheekh Khaliil C/laahi Axmed.
Munaasibad kooban oo loo sameeyay wareejinta kutubtaasi oolagu qabtay xarunta wasaaradda diinta iyo awqaafta ee magaaladda Hargaysa waxaa goob joog ka ahaa wasiirka diinta iyo awqaafta ee Somaliland, wasiir ku xigeenka iyo isu-duweyaasha wasaaradda ee goboladda Maroodijeex, Togdheer, Saaxil, Sanaag iyo badhan oo ah goboladda loo sii qaybin doono kutubtaasi.
Sidoo kale waxaa dhinaca dawladda Baxrayn masuuliyiin ka socday wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha islaamka ee dalka Baxrayn, oo uu ka mid ahaa sheekh Khaalid oo ka socday hay’adda munadamatu dacwatu islaamiya ee ka shaqaysa faafinta diinta islaamka.
Sheekh Khaliil C/laahi Axmed, wasiirka diinta iyo awqaafta Somaliland oo halkaasi hadal ka jeediyay ayaa tilmaamay qiimaha uu xagga ALLE ka leeyahay qofka koryeela kitaabkiisa Qur’aanka kariimka ah iyo meeqaamka ay yeeshaan kuwa hoos u dhiga ama quudhsadda.
“Qofkii ILLAAHAY (SWT) kitaabkiisa koryeela, ILLAAHAY-na wuu koryeelaa. Qofkii qoodhsadda ama hoos yeelana, isna meeqaam hoose ayuu ILLAAHAY (swt) ka yeelaa” ayuu yidhi wasiirku.
Waxaanu wasiirku ugu baaqay isu-duweyaasha wasaaradda diinta ee goboladda kutubtaasi loo kala qaybin doono in ay ka warhayaan goobaha lagu barto diinta iyo masaajidadda. Waxaanu yidhi “Waxaan ku boorinayaa isu-duweyaasha wasaaradda diinta iyo awqaafta in ay ka warhayaan goobaha barashadda diinta iyo malcaamadaha, mederasadaha, oo ay waxbarashadoodda ka warhayaan. Sidoo kale-na ay ka warhayaan masaajidadda ay kutubtu ku arraday”.
Sheekh Khaalid oo ah guddoomiyaha hay’adda munadamatu dacwatu islaamiya ee ka shaqaysa faafinta diinta islaamka, oo isna halkaasi hadal ka jeediyay ayaa faahfaahin ka bixiyay caawimadan kutubta ah ee ay wasaaradda diinta iyo awqaafta ku wareejiyeen.
Geesta kale hay’adda munadamatu dacwatu islaamiya waxay 1600 oo kitaab ku wareejisay qaar ka mid ah mederasadaha lagu barto diinta islaamka ee ku yaalla magaaladda Hargaysa.